Garaadso Intaadan Guursan | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	11:56 am » Buuggi Jubbaland baalki ugu dambeeyay maanta ayaa la rogay 11:31 am » Dagaal khasaaro dhaliyay oo maanta Ciidamada Dowladda ku dhex maray Magaalada Muqdisho 10:26 am » WAR DEG DEG: C/naasir Seeraar oo dagaalo ku dhawaaqay iyo xaalada Magaalada Kismaayo oo kacsan 8:54 am » Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo ku wajahan Degmooyinka Jilib iyo Bu’aale 8:25 am » Hawlgalo culus oo maanta ka soconaaya Xaafadaha Ceel Qaloow iyo Buulo Xubeey 8:18 am » WAR DEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Baydhabo 8:11 am » Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo weeraraaya Degmada Baraawe 7:17 am » Madaxweyne-yaasha Igad oo sheegay inaysan waxba kama jirin Doorashadii Axmed Madoobe 7:57 pm » Culumada Ahlu Sunna oo taageeray howlgalada lagu baarayo guryaha ku yaala xaafadaha Muqdisho 7:55 pm » Askari ka tirsan Puntland iyo Nabadoon xalay lagu kala dilay Boosaaso iyo Galkacyo By: Mastar // Jul 23 2012 at 9:39 pm // 2,663 Reads // Article & Opinion, Wararka Somalia Garaadso Intaadan Guursan Share Tweet
Waxaa hubaal ah haddaad tahay guurdoon , in aad dooneyso qof aad nolosha macaankeeda isla qeybsataan,qof aad mugdiyada nolosha aadamaha soo foodsaara iska weheshataan, qof aad isku noqotaan muraayad oo midba midka kale isku daawado, qof uu Eebbe idin kala siiyo awlaad aad ku indho qabowsataan, qof aad nolosha inta idiinka dhiman iska soo ag toostaan, iyo weliba qaar kaloo badan oo aanan qoraal kaga soo gayoon karin. Run ahaantii, waa nolol dhan oo aan qoraal lagu soo
Hadaba waxaa is weydiin mudan, sidee lagu helaa qof wanaagsan? Inta aanan idiin far fiiqin qofka wanaagsan sida lagu helo ama dadka lagaga garto, aan ku weydiiyo su’aal. Guurdoonyahow dhowrsani maxaad ku dooran lahayd gacalka aad dooneysid xitaa
hadduu Rabbi idin gaarsiiyo 100 sano inaad iska soo ag toostaan?
Waa su’aal da’weyn oo dadka guurdoonka ah qaar badan oo ka mid ihi jawaabteeda saxda ah ay hareer maraan. Waa arrin inta badan qofka guurdoonka ah ay ka qariyaan wax yaabo kale oo dhalanteed ah. Waa su’aal u baahan in uu qofka guurdoonka ah, waxbadan ka fiirsado jawaabteeda; islamarkaana uu isku dayo inay bal jawaabtiisu tahay mid guul u horseedi karta. Maanta waxaan joognaa wakhti ay noloshii isbeddashay, wakhti ay dadkii isku ekaadeen, oo qofka xun iyo kan fiican ay adagtahay inaad kala garatid, wakhti is aaminiddii ay yaraatay. Hadduu Rabbi idmo waxaan qormadaydan kaga jawaabi doonaa su’aalo dhowr ah, oo ay ka mid yihiin:
Qormadan, oo hadduu Rabbi idmo taxane noqon doonta, qeybaheeda horana aan wiilasha kula hadli doono ayaa waxaan u hibeeyey dhallinta Soomaaliyeed ee guurdoonka ah iyo wiliba qof kastoo jecel inuu yagleelo (dhiso)guri iyo sowjad (Xaas) sabab u noqota inuu ku naaloodo(raaxaysto) nolol ey farxad, xasillooni , deganaan iyo jaceyl ku dheehanyihiin . Waxaa layiraahdaa,
”ما ذاق طعم العیش من لم یكن لھ حبیب یطمئن الیھ ویسكن“
Isku day inaad noqoto qof dhowrsoon marka hore, qof Alle ka baqa, qof ku xiran diinta Alle.
Haku mashquulin inaad raadiso qof wanaagsan adoon taada marka hore wanaajin. Marka
hore wiilyahow noqo Maxammed dhowrsoon waxaad heleysaa Khadiijo dhowrsoone.
Qofkii wanaagsan wuxuu helaa qof wanaagsan, qofka xunna wuxuu helaa qof xun. Sidaa
daraadeed naftaada wanaaji Eebena ma dayici doono dedaalkaaga, oo wuxuu kuu sahlayaa qof dhowrsoon oo aad adduunyada raaxo kuwada noolaataan.
Tuducyadan gabayga ah ee aan kor ku xusay, waxey tilmaamayaan ama micnaynayaan
xadiiskii nabiga (csw) uu kula dardaarmayey dhallinta guurdoonka ah. Waxey tilmaameysaa inuu wiilku ahmiyaddiisa 1aad ka dhigo siduu u heli lahaa gabadh diin leh.
Maalka: Maalku waa wax la heli karo lana waayi karo “abaar iyo barwaaqaa is xiga laba
ayaamoode, alllaylkiina waxaan joogin baa iman dharaartiiye”.
Diin ku dooro: Gabadha diinta lihi waa tan garanaysa siday u gudan lahayd xaqa uu
ninkeedu ku leeyahay, siday u dhawri lahayd asraarta gurigeeda iyo nafteeda, carruurtana ugu barbaarin lahayd tubta toosan. Run ahaantii nin nasiib leh ayaa hela gabadh diin leh. Gabadha diinta leh waa furaha nolosha. Waa qof adduunyadaada iyo
aakhiradaadaba kuugu kaalmeyneysa wanaaga. Lammaanahaaga ha ku qiimeyn
qurux keliya, ha ku xulan xoolo keliya, ha ku raacin reer keliya, ee ku dooro diin.
Hadduu Ilaahay ku siiyo gabadh diinna leh, quruxna leh waa mahad Alle, haddii aad
hesho gabadh diinna leh, xoolana leh waa mahad Alle, haddii aad hesho gabadh
diinna leh, reer magac lehna ka dhalatay waa mahad Alle, laakiin diintu hakuu noqoto shuruudahaaga midda ugu horreysa ee aad wax ku doorato, kedibna wuxuu
Ilaahay kuu raaciyo diin wanaageeda oo nasab, maal, iyo qurux ahna, ay kuu tahay
nimco dheeraad ah. Gabadh diin leh marka hore raadi, iyadaa laga helaa nolosha
raaxadeeda. Xadiis uu Abdullaahi ibn Cumar Ibn Caas warinayo buu nabiga (csw)
“الدنیا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة”
(Adduunyadu waa dhaldhalaal iyo raaxeysi yar, dhaldhlaalka iyo raaxaysigaa yarna
waxaa ugu kheyr badan haweeney saalixad ah oo wanaagsan) Shaacirkii wiilka guurdoonka ah la talinayayna waa tuu lahaa;
AKHLAAQ IYO DHAQAN WANAAG KU DOORO: Waxaan joognaa xilli dhaqankii
wanaagsanaa uu sii gabaabsi yahay, xili akhlaaqdii suubaneyd ay god madow kusii
aroorayso, xilli xishoodkii iyo xayadii lakala dhaqaaqay. Waa lagama maarmaan
inaad akhlaaqda iyo dhaqankeeda ka eegto gabadhaad guursaneyso. Umaduhu
waxay ku dhisanyihiin akhlaaq iyo qiyam, haddey akhlaaq iyo beelaan qiyam way
burburaan, Xadiis uu warinayo Abu Saciid Al Khudriy oo uu ka warinayo Nabigu
CSW wuxuu inoo tilmaamayaa;
أ”كمل المؤمنین إیمان اً أحسنھم أخلاق ا“
(Dadka Mu’miniinta ah waxaa ugu iimaan dhameystiran, kooda ugu akhlaaqda
wanaagsan) Mar kale wuxuu nabigu leeyahay CSW
إ ”ن الن اَّس لَ می عْ ط وَ اْ ش یْئ اً مخَِ ینْرْ ا خ لُ قُ ح سَ نَ “
(Dadka lama siin oo looma hibeyn wax ka wanaagsan oo ka kheyr badan akhlaaqda
wanaagsan) Haddaad dooneyso gabar kheyr badan oo aad ku indho qabowsato, akhlaaq wanaag ku dooro.
Haddey gabari akhlaaq beesho yeysan gurigaaga soo gelin.
DABEECAD WANAAG KU DOORO: Dabeecaddu waa muhiim. Waa muhiim ineey
labada qofi isku dabeecad yihiin, dad is fahmaya oo nolosha isku si u arkaya yihiin.
Dabeecaddu waa qeyb ka mid ah is fahanka, labada qof. Haddey labada qof is
dabeecad fahmaan waxaa hubaal ah ineey nolosha inteeda kalena isku fahmayaan,
haddiise labada qof dad is dabeecad fahmaya eysan aheyn waxaa hubaal ah inuu
gurigaa ku dambeynayo burbur iyo kala haad.
Waxaa laga helaa inta badan masaajidda, maraakista diinta lagu barto iyo guri diinta
Alle saldhig uu u tahay
Waxaa lagu gartaa gabdhaha ay saaxiibada yihiin had iyo jeer oo ah kuwa diin leh
Waxaa lagu gartaa oo astaan u ah in ay had iyo jeer xijaabkii Alle ku waajibyeelay
Waxaa lagu gartaa xishoodka joogtada ah. Waa gabar had iyo jeer xishood dheeraad
ah aad wajigeeda, socodkeeda iyo hadalkeeda ka dheehaneysid
Waxaa lagu gartaa qoyska ay ka soo jeeddo dhaqan wanaagiisa. Haddey hooyadeed iyo aabbeheedba yihiin dad aan bulshada magac iyo sumcad sare ku laheyn oo aan bulshada wax qiima ah ku lahayn, waxey u badantahay ineey gabadhoodana wanaag badneeyn, sababtoo ah inta badan dhaqanka waa la iskaga daydaa.
Waxaa lagu gartaa markaad haasaaweysaan ineysan ahayn mid hadal kugu dardarta
oo afka ku goosata (Waa hadaadan xumaan kula hadlin)
Waxaa sidoo kale lagu gartaa markaad haasaaweysaan ineey tahay gabadh had iyo
jeer wixii Rabbi xadeeyay ee sharci ah, aan ku xadgudbin adna aan kaa ogalaan
inaad ku xad gudubtid.
Waxey caro awgeed isdaba martaa markaad kala hadasho wuxuu san Ilaah SWT
Raalli ka aheyn
Waxey kaala sheeykeysataa mustaqbal iyo sidii aad u yagleeli lahaydeen guri Illahay
raali ka yahay.
Waxey tix galisaa ehelkaaga iyo qaraabadaadaba.
Waxey ka ag fogaataa oo ku xajiimootaa dumarka caariyaadka ah. (Ineey dacwo iyo
diin u gudbineyso mooyaane)
Kuguma xirto inaad u dhigto aroos qaaliya, gawaari badan oo lagu galbiyo, qasri
qaaliyoo la dejiyo iwm
Haddey gaajeysantahay iyo haddey dharagsantahayba cabasho kama maqleysid, oo
waa gabar ku qanacsan wuxuu Alle siiyay. Waa gabar uu Rabbi qanaaco siiyay.
Gabayaagii xakiimka ahaa wuxuu yiri;
Waxaa hadalkeeda, muuqeeda, socodkeeda, dharkeeda, asxaabteeda, meelaha ey
joogta had iyo jeer laga dheehdaa, laga dareemaa muuqaal uu Rabbi raali ka
Iyo wiliba qaar kaloo badan oo uu wiilka dhowrsani maskaxdiisa dhowrsan ka dhex
Garaadso intaadan guursan, u diyaar garow noloshaad dooneyso inaad abuurto.
Ha guursan hadaadan u heyn aqal iyo qalbi aad dajiso walaashaa
Iska fiiri qoyska ay gabadha ka dhalatay, hooyadeed, aabbeheed, walaaleheed iyo
wiliba saaxiibadeedba, sababtoo ah dadku waxeey isku yeeshaan saameyn aad u
Haddaad dooneyso guur xalaal ah, shukaansigaaga u mar waddo xalaal ah.
Ogow ninkasta wuu awoodaa inuu xaas guursado oo caruur dhalo, laakiin nin
kasta ma awoodo inuu xaaskaas iyo caruurtaas mas’uuliyadooda qaado
Haku dheeraan mudada aad gabadha wada sheekeysanysaan. Inta badan waxaa
dhacda in muddo intii la wada sheekeysto, oo xiisuhu dhammaado, kadibna la kala
Haddaad rabtid inaad waddamada reer galbeedka ku dhex guursatid, guurso gabar
ay u joogaan hooyo, aabbe iyo wiilal la dhashay, kuwaasoo bulshada dhexdeeda ka
maamuusan, ku leh magac iyo mansabba. Sababtoo ah dhulkaad joogtid waa dhul
dhib badan, waa dhul dumarka awood loo siiyay sidii iney iyagu ninka furi karaan
oo kale, taas oo sababtay shacbiyadda reer galbeedka, furriinku inuu ka marayo
60% (Boolkiiba lixdan). Nasiib xumo waxaa dhacday dumarkii muslimaadka ahaa
markey dhulalka reer galbeedka yimaadeen iney iyaguna is bedalaan, oo
dhaqankaa ku qancaan qayb yar, oo Ilaahay u naxariistay mooyaane. Sidaa
daraadeed waa gaashaan inaad guursatid gabadh hooyadeed, aabbaheed iyo
walaalkeed oo weliba bulshada sumcad ku leh, inaad guursatid.
Gabadha aad guursaneysid iyo adiga dhexdiina ku abuur geed hadh weyn oo
kalsooni la yiraahdo.
Haka welwelin waxaad siin lahayd iyo waxaad ku dhisan laheyd reerka marba
haddaad tahay qof raba inuu dhameystiro qeyb diintiisa ka mid ah, waayo Rabbi
baa kaa kafaalo qaaday. Xadiith Abaa Hureyra (RA) uu warinayo oo xassan ah buu
nabigu (SAW) ku leeyahay ;
“ ثلاثة حق على لله عونھم: المجاھد في سبیل لله ، والمكاتب الذي یرید الأداء ، والناكح الذي یرید العفاف“
(Saddex qof wuxuu Alle dushiisa waajib isaga dhigay inuu u kaalmeeyo: Qofka
Illaahay wadadiisa ku jihaadaya, Ninka adoonka ah ee raba inuu xoroobo iyo Ninka
guursanaya , guurkana ka rabo inuu ku dhowrsado)
Gabadhaad guursaneyso iska fiiri, ma haweenkii horee wanaagsanaa bey
waddadoodii heysaa mise kuwan maanta jooga ee nolosha xaqiiqadeeda ka leexday
bey jidkooda haysaa. Waxaa la yiri berigii hore, saddex baa dumarka loo guursanjiray, saddex baa beddashay, saddex baase bi’iyay.
Saddex baa dumarka loo guursan jiray: (Waa saddexdda aan rabo inaad
lammaanahaga ku dooratid)
1. I dheh aan dhageystee, (waa xaas ku maqleysa oo ku addeeceysa oo dhego
2. ii dhiib aan kuu dhigee (waa xaas hantidaada kuu dhowreysa oo biilkaad siiso
wixii looga baahanyahay ma’ahee inta kale kuu dhigeysa oo kuu keydineysa)
3. iyo iga dhal aan dhunkadee. (Waa xaas u diyaar ah iney dhasho awlaad oo
korsato islamarkaana ku faraxsan.)
Waxaa beddalay saddex: (Sadexdaana waa saddexdda aan rabo inaad kaga
1. I dheh aan dhaqaaqee (Waa haweeney aan dhegba jalaq kuu siineyn oo markaad
la hadashaba irridka ka si baxeysa, haddaad wax u sheegtid iyo haddaadan wax
u sheeginba ay isku mid u tahay)
2. ii dhiib aan kaa dhaqdee (Waa haweeney biilkaad u dhiibtaba meel dhiganeysa,
oo haddey doonto reerkaba cunta la’aan ka dhigeysa, oo waxey gacanta ku
dhigtaba sanduuqa keydka (Saving account) u gaar ah dhiganaysa)
3. iyo iga dhal aan kugu dhibee (Waxaan u maleynayaa middan u danbeysa in ay
qurbojoogta waddamada rer galbeedka jooga ku badantahay. Waa haweeneyda
markaad is yara qabataanba dharka bannaanka kuu soo dhigeysa, oo guriga kaa
xiranaysa, oo caruurtaada kuu diideysa inaad aragtid. Haddaad isku daydo
inaad caruurtaada soo booqatana, askarta kuugu yeereysa. Waa iga dhal aan
Saddex baase bi’iyay:
1. Dhego la’aan,
2. Dhaqasho la’aan
3. iyo Dhalmo la’aan
Inta aadan guursan ka istakhaareyso gabadhaad rabto inaad guursato. Hadda kuma
lihi adoon dedaalkaagii gudan Ilaah iska talo saaro, oo istakhaareyso, maya maya!
Istakhaarada iyo talo saarashada Rabbi waxaa lala yimaadaa markaad adigu marka
hore inta awoodaada ah dedaasho, oo aad la timaadid dhaq-dhaqaaqii lagaaga
Ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay gurigaaga ha ku aasaasin wax uusan Alle raalli
ka aheyn, sida inaad meelo ragga iyo dumarka kuwada kulmaan oo lagu heeso
kireyso. Arooskaagu waa inuu noqdaa aroos dad muslim ah leeyihiin, guri muslim
ah lagu aasaasayo, la rabo in gurigaa naxariista Rabbi ay asiibto. Si uu u noqdo
gurigiinu guri aad nolol raaxo leh kuwada qaadataan inta noloshiinna ka dhiman,
Eebana idin ka dhex abuuro oo idinku arsaaqo ubad aad ku indho qabowsataan.
ولله یقول الحق وھو یھدى السبیل Maxamuud Suleebaan (Mubarak Hadi)
Waligeed kuma hilmaami doonto xaaskaadu hadii aad sidaan u sameyso 15 May waa dhaxal awoowe (Fac awoowe-abkow: 1935 – 1950) (Fac aabbe: 1960 – 1990) (Faca wiilka: 1990 – 2013) Qiso Xanuun badan:Jirkaaga ii hibeey ayuu i dhahay hadaad i jeceshahay ana waan isku dhiibay mana i guursan!!! Bayern Munich oo garoonkeeda ku xasuuqday Xalay Juventus qiiqii Talyaanigana Bayern iska indho tirtay!!! Facebook-ga oo la ogaaday in laga dhaxlo cudurada ay ka mid yihiin…….. Wariyeyaasha Muqdisho qaarkood heybadii saxaafadeed malahan iyo Talo aan ujeediyey (Warbixin Kooban) Barcelona oo gool bareejo ay heleen si dirqi ah ugu soo baxay Afar dhamaadka Koobka Qaarada Yurub Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments